Ngeke mhlawumbe ungabi nombono owodwa owodwa emindenini emikhulu. Mayelana nezici ezinhle nezingozi zokuhlala emndenini lapho kunezingane eziningi, umuntu angakwazi ukukhuluma isikhathi eside, futhi isikhathi ngasinye ukuthola izimpikiswano ezintsha nezisha ngokuqondene nomndeni onjalo, noma ngokuphambene, ukukhomba izinhlangothi ezingalungile.
Ngokuqondile, umuntu angasho ukuthi angaphila emndenini onjalo-kuphela labo abahlala kuwo abangazi. Kuzofaneleka ukuphawula ukuthi lokhu kunzima kakhulu. Yingakho imindeni eminingi ixazululwa eyodwa, iningi lamantombazane amabili.
Okokuqala, umndeni omkhulu kuqala futhi ube umthwalo osindayo kubazali. Ngokuvamile, ngaphambi kokuba izingane zisize okungenani kancane ekhaya, umama nobaba kufanele batshale inani eliningi lamandla, amandla nezinzwa zokuthuthukiswa okuphelele kwengane. Okwesibili, kuvame ukuphakama ubunzima lapho kubalulekile ukuhlanganyela konke ngokulinganayo, uma ukudla nokugqoka kungcono kakhulu, ngezinye izikhathi izinkinga ziphakama ngesikhathi kanye nokunakekelwa. Futhi into esemqoka kusekhona ukungabi namali njalo, ikakhulu uma izingane ziqala ukuthola imfundo. Futhi, njengoba kuyaziwa, imfundo yethu yamahhala nemithi ayishibhile.
Ngokusakaza isabelomali somndeni, lokho kuzohlala ngokwezomnotho emndenini omkhulu.
Ubani owokuqala ukuvuka, lokho kanye nama-slippers.
Yiqiniso, imindeni yanamuhla enezingane eziningi ithola isilinganiso esithile esivela kuhulumeni njengesibonakaliso sokubonga, ngokukhulisa isimo sabantu, sinquma njengenxephezelo yesibindi. Kodwa labo abhekene nalokhu, baqonde ukungabi namuntu ngalezi zindleko, futhi ukuthi kuphela kubo, akunakwenzeka ukuhlala. Ngakho-ke, abazali kufanele basebenze okuningi ekhaya, futhi emsebenzini, ngezinye izikhathi ngisho nangesinye. Izinkinga eziningi ziphakama lapho izingane zidinga ukuhlinzekwa ngezingubo.
Ngendlela, nguyena ongaba yindlela yomnotho emndenini omkhulu. Kusobala ukuthi uma kunezingane ezintathu noma ngaphezulu emndenini, othile uyoba ngokobulili obufanayo. Njengoba wazi, izingane zikhula ngokushesha, futhi ngokushesha nje zikhula ezingutsheni zabo nasezicathulweni zabo. Uma ubeka ngokufanelekile ukugqoka izingubo, khona-ke isizukulwane esincane sizohlinzekwa kancane. Yebo, futhi umqondo onjalo wokuthi ungaphelelwa kanjani umzalwane noma udade uvame ukujwayele ngisho nezingane ezivela emindenini emikhulu.
Imali engakanani usuku oluya ekudleni okugcwele emndenini omkhulu, akunakwenzeka ukuthi othile uzothatha isinqumo sokubala. Emva kwakho konke, uma ushaya yonke imali esetshenziselwa ukugcwalisa isiqandisisi, inyanga - umphumela ungangethusa. Yiqiniso, ukusindisa ekudleni, futhi uthenge izimpahla ezingekho esimweni esihle, noma ungathengi imikhiqizo edingekayo ukuthenga ubuncane - hhayi okukhethwa kukho. Izingane kufanele zidle ngokugcwele, kanye nabazali futhi, ngoba ngemithwalo enjalo, umzimba ngeke ube nokuthile okuzogcwalisa amandla awo. Kunezinketho eziningi lapha, futhi zombili zifanele umzamo nomzamo wabazali, futhi uma kungenzeka, izihlobo zabo.
Inombolo ye-Option 1: sizilungiselela. Amashalofu esitolo agcwele imikhiqizo ehlukahlukene ephethwe yisikhathi. Kodwa yonke indlovukazi iyaqonda ukuthi noma ngabe umkhiqizo ungumgangatho owamukelekayo, intengo ibonakala ingaphezu kweqile. Kungcono kakhulu ukonga futhi kunenzuzo yokupheka konke ngokwakho. Okuwukuphela "kodwa", lokhu, ukupheka kuthatha isikhathi. Uma kukhona izingane ezindala, khona-ke ungabakhanga, kodwa ngenkathi izingane zizincane, omama kudingeka badwengule. Ezimweni ezinjalo, ake wena, oshade naye aqonde futhi axolele, kodwa kwimenyu kuzodingeka ukhethe izitsha ezilula ezingadingi izindleko ezinkulu zezimali nezomzimba. Ubuciko bokuzijabulisa uzoyifaka kamuva. Ngaphezu kwalokho, ekhaya, kungenzeka ukupheka cishe yonke into, futhi ezimweni eziningi kuvela kangcono nakakhulu.
Inombolo ye-2: indlu edolobhaneni. Ungaphila kancane emndenini omkhulu, kuyilapho ungavimbeli izingane emifino kanye nezithelo ezidingekayo? Kulungile, zikhulise wena ngokwakho. Kungcono nakakhulu, uma abazali bakho noma izihlobo zakho zenza lokho. Isikhathi sabantu balimi abalimi abanomhlanjesi basesidlulile, kodwa namanje kukhona abantu abangafuni ukubhekana nalo msebenzi obunzima. Kuhle kakhulu uma abantu abanjalo bevumelana, behlanganyela nawe izithelo zomsebenzi wabo, ngokukhululekile noma ngokulinganisela, noma mhlawumbe ngisho nemali yokubiza. Futhi kulokhu, ngeke kube kuphela ngemikhiqizo yezitshalo ezivela emthonjeni, kungenzeka ukhetho kanye nokuthola itafula lemikhiqizo yobisi, inyama, amaqanda - lokhu kusiza ukugcina izimali ezidingekayo.
Ngemuva kwezinsuku eziningi zokusebenza, nezinyanga zokusebenza njalo, wonke umuntu ufuna ukuphumula. Uma imindeni eminingi engenayo izingane, noma ikhona, kodwa iholidi elilodwa elihlaselayo, iholidi kanye namavikisonto liyabonwa ngenjabulo. Lokho kumndeni omkhulu, ngezinye izikhathi kungabangela ukungena. Phela, izingane ngesikhathi sokuphumula zidinga okuthile okufanele zenze, futhi ehlobo nakwezinye izindawo ukushayela, nazo zidinga ukunakekelwa. Futhi uma ezinsukwini ezijwayelekile ukunakekelwa kuthathwa yi-kindergarten noma isikole, ngosuku lokuphuma nangamaholide izingane ezishiywe zona kanye nabazali bazo usuku lonke. Ngakho-ke, abazali badinga okungenani ukuphumula okunye, nokuvuselelwa kwamandla. Ungaba kanjani kulesi simo?
Ngokuvamile imindeni enjalo ehlobo noma ngesikhathi seholide umbuso unikezela izaphulelo zamakamu ezempilo nezindlu zempilo. Lapho, izingane zichitha isikhathi, futhi ngokuvamile zijabulela injabulo. Ukushintsha kwesimo kanye neqembu elisha kuzuzisa izingane, kanye nabazali abangaba yedwa ngaleso sikhathi, futhi bavele balele.
Buyela endlini emzaneni. Uma unethuba elinjalo, ukufakela izingane iholidi noma iholidini kunogogo nomkhulu-kwenze. Ikakhulukazi uma abazali bakho behlala kude nomuzi. Umoya omusha, isikhathi esisebenzayo, izithelo nemifino ngokushesha kusuka ensimini - izoba nomthelela ezinganeni zakho kangcono kunanoma yiliphi i-resort. Ngesikhathi esifanayo, iholide elinjalo ngeke likukhokhe lutho. Ungesabi, ukhululeke abazali bakho. Ezimweni eziningi, izingane ezivela emindenini emikhulu zizimele kakhulu, futhi ugogo uzojabula nakanjani nazo zonke lezi zinkinga ezincane.
Kunzima ukuhlala ngokwezomnotho emndenini omkhulu, ngesikhathi esifanayo, uzama ukucabangela izidingo zomuntu wonke. Kodwa njengoba umkhuba ubonisa, lokhu kungenzeka. Ungadabuki imizamo oyenzile, okubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi kungani, noma kunalokho okwenzayo.
Indlela yokuqeda umoya omubi?
Izindlela zokugwema isimiso sasekhaya
Ngosuku olusha ngomoya omuhle
Ama-masks ama-5 angavamile wezinwele zakho ekhaya
AmaSaladi Omnyaka Omusha 2017 - zokupheka ezilula futhi okumnandi ngaphandle kwenkukhu enezithombe
Ukuphepha kokudla nekhwalithi
Izinzuzo kanye nokungahleki kwempahla yepulasitiki
U-Maxim Galkin wabuyela esibhedlela ngokushesha
Shish kebab kuhhavini kusuka engulube elwandle elenziwe ngegromegranate
Kungani kungadli ukudla okunomsoco?